Ebe a na-akụ ihe ọkụkụ n'okpuru poteto mụbara na ugwu ọdịda anyanwụ nke Europe - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Ebe a na-akụ ihe ọkụkụ n'okpuru nduku mụbara na ugwu ọdịda anyanwụ nke Europe
Mpaghara a kụrụ n'okpuru poteto na Flanders na-eto eto: ugbu a ọ bụ hectare 51, nke pụtara mmụba nke 708%, data sitere na Belgian Research Center for Potato Cultivation (PCA) gosiri. Ndị Dutch na-akọ ya Nieuwe Oogst Portal. Flanders bụ mpaghara dị na ugwu ọdịda anyanwụ Europe, nke dị na mpaghara France, Belgium na Netherlands.
Ndị ọkachamara sitere na Belgian Research Center maka ịkụ nduku tụrụ aro na ihe na-akpali ịkụkwu poteto bụ mmụba nke ọnụ ahịa nkwekọrịta. Na Jenụwarị, ọ nweghị ihe gosiri na ọnụ ahịa mmepụta ga-ebili nke ukwuu na 2022.
Tụkwasị na nke ahụ, ọganihu na mpaghara oche nwere ike ịkọwa site na ọnụahịa kachasị mma na ahịa efu, ndị nyocha na-ekwu.
Kemgbe afọ a, ekewala mpaghara nduku mkpụrụ ka ọ bụrụ poteto mkpụrụ akwụkwọ ikike (1052 hectare) na poteto mkpụrụ osisi ndị ọrụ ugbo (hectare 371). Mkpụrụ osisi bụ akụkụ nke ndị na-akụ mkpụrụ na-eto site na poteto mkpụrụ maka ojiji nke ha n'oge na-esote. Ogo nke ala n'okpuru poteto ndị dị otú ahụ mụbara site na 2%.
Ihe ọkụkụ nke nwere mmụba kachasị ukwuu na mpaghara a kụrụ bụ ọka maka ọka. Opekempe, 56% ọzọ ọka ọka ka a na-akụ na hectare 046 n'afọ a, dịka PCA siri kwuo. Mpaghara n'okpuru ọka wit na-agbada site na 32%, n'okpuru ọka bali oyi - mụbara site na 4%. Mpaghara nke chicory mụbara site na 9%. A na-ahụ mbelata kacha ukwuu na mpaghara ndị a kụrụ mgbe ọ na-eto akwụkwọ nri na ala mepere emepe.
Tags: European Unionpotetompaghara n'okpuru ndukuugbo ndukuFlanders
Otu nduku di iche-iche n’otu ahia ohuru
Akwa ohere maka obere ubi. Kpoo NOVA na AGROSALON-2020